မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက် > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / သတင်း / မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ March 12, 2012 သတင်း Leaveacomment 165 Views
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ – မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အနေနဲ့ မကြာမီကာလမှာ မှတ်ပုံတင်မယ်လို့ကြားသိရပါ တယ်၊ ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို သိချင်ပါတယ် ?
နိုင်တင်အောင်(ဒုဥက္ကဌ-၁) – လာမယ့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ ကျွန်တော်တို့မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အနေနဲ့ မှတ်ပုံတင်မှာပါ၊ ကျွန်တော်တို့ မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့နာမည်နဲ့ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် တခြား နာမည်တစ်ခုခုနဲ့လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ – မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီနဲ့ ပူးပေါင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ကြားရတယ် အဲဒီအစီအစဉ်ကရော ဘယ်လိုလဲ?
နိုင်တင်အောင်(ဒုဥက္ကဌ-၁) – ဒါကို ကျွန်တော်တို့အများကြီး ကြိုဆိုပါတယ်နော်၊ ပေါင်းရမယ်၊ မွန်က တစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်ဖို့လိုမယ်၊ နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေရင် သိပ်မကောင်းဘူး၊ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မွန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးပဲ၊ မွန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရည်မှန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းနိုင်ရမယ်၊ ဒါကျွန်တော်တို့မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ရဲ့ ရပ်တည်ချက်သဘောထားပဲ။
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ – ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လက်မခံဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်၊ ဒီအခြေခံဥပဒေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြင်မှာလဲ၊
နိုင်တင်အောင်(ဒုဥက္ကဌ-၁) – ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်မယ်ဆိုတာက လက်ရှိနိုင်ငံတော်သဘောထားက လွှတ်တော်အတွင်းမှာ ပြင်မှရမယ်၊ ပြင်ပကနေ ပြင်လို့မရဘူး၊ လက်ရှိအနေအထားကလည်းပြင်ဖို့မလွယ်ဘူး၊ လွှတ်တော်မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးတွေ အများစုဖြစ်နေတယ်၊ ဒီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ကြားဖြတ်ပွဲနေရာအားလုံးနိုင်တာတောင်မှ အားလုံးရဲ့(၁၀)ရာနှုန်းတောင်မပြည့်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေကို နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်းသိနေတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့လည်း လွှတ်တော်ထဲရောက်ရမယ်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကလည်း သူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့သူ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ် ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေနဲ့မညီတဲ့ဟာကို ပြင်မယ်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ လိုအပ်ချက်တွေကို ကိုက်ညီလာအောင် ပြင်ဆင်ရမယ်၊ အဲဒီလို ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ ညှိရမယ်၊ လွှတ်တော်နဲ့ညှိပြီးသွားရမယ်၊ လောလောဆယ်ပြင်လို့မရရင်လည်း လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲ ၂၀၁၅ မှာ လွှတ်တော်ထဲဝင်ပြင်လို့ရမယ်၊ ကရင်ခေါင်ဆောင်စောဘဦးကြီးကပြောခဲ့ဘူးတယ်၊ လူမျိုးတမျိုးရဲ့ အခွင့်အရေးဟာ တန်တူရေးရှိရမယ်၊ အရိုးဆုံး အရှင်းဆုံး ဗမာတစ်ကျပ် ကရင်တစ်ကျပ်ဖြစ်ရမယ်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေက ဟိုးအောက်ဆုံးအဆင့်နေရာမှရောက်နေတယ်၊ ဒါကိုပြင်ဆင်သွားရမယ်၊ ပြင်မယ့်ဟာက ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုပြင်ရမယ်၊ လူမျိုးစုံချစ်ကြည်ရေးသွေးစည်းရေး အခြေခံအပေါ်မှာတည်ဆောက်တဲ့ တကယ်ပြည်ထောင်စုအစစ်ဖြစ်မှ ရေရှည်အတူနေသွားလို့ရမယ်၊ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးလည်းရရှိနိုင်မယ်၊ အကျိုးရှိမယ်၊ တကယ်မို့တစ်ပြည်ထောင်စနစ်ပုံစံမျိုးနဲ့ ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်ကိုကြည့်ပါ၊ စစ်တောင်းကနေ ရေးမြို့နယ်အထိ ဒါမွန်ပြည်နယ်ပဲ၊ ကျွန် တော်တို့လိုချင်တာက အာဏာရှိတဲ့ပြည်နယ်ဘဲ၊ အဲဒါမှသာလျှင်ဗမာပြည်ရဲ့တန်တူရေးပြဿနာကိုရှင်းလို့ရမယ်၊ အဲဒီလိုအာဏာရှိတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်ဘို့ဟာ မွန်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းအတွက်ပဲ တောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံက ဒါကိုတောင်းဆိုနေတယ်၊ ခုနက ဥက္ကဌကြီး(နိုင်ငွေသိမ်း)ကပြောတယ် ဖယ်ဒရယ်ကိုတောင်းနေတာ၊ အဲဒီဝေါဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တချိန်တုန်းကဗိုလ်နေဝင်းတို့က အကြောက်တရားသွင်းထားတယ်၊ တကယ်တော့ ဖယ်ဒရယ်မူဆိုတာ ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူး၊ အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းပါတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကလည်းဒီမူကိုလက်ခံထားတယ်။
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ – မွန်ပြည်သစ်ပါတီက နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးရေးလုပ်နေပါတယ်၊ အန်ကယ်တို့အနေနဲ့ရော မွန်ပြည်သစ်ပါတီနဲ့ ယခုလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကို ဆွေးနွေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသလား?
နိုင်တင်အောင်(ဒုဥက္ကဌ-၁) – မွန်ပြည်သစ်ပါတီနဲ့ ကျွန်တော်တို့က သီခြားပါ။ ကျွန်တော်တို့က ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးလက်နက်မကိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်း၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီကတော့ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ဒါပေမယ့်လို့ ဗမာပြည်ရဲ့အပြောင်းအလဲကို အခြေခံပြီးတော့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီနဲ့တဖွဲ့တည်းအနေနဲ့မဟုတ်ဘူး၊ တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကို ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအထဲပြောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီကလည်း နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ထဲ ကိုဝင်လာရမှာပါ၊ ဆိုလိုတာက လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ ခွဲရတော့မယ်၊ တပ်က တပ်အပိုင်းနဲ့သွားရတော့မယ်၊ ဆိုလိုတာကတော့ ကာကွယ်ရေးလိုင်းပေါ့ဗျာ၊ ပါတီက နိုင်ငံရေးလိုင်းကိုသွားရတော့မယ်၊ အဲဒီအကွေ့ကိုရောက်တော့မှ ကျွန်တော်တို့ မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့နဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ညှိလို့ရမယ်၊ လက်ရှိအခုအနေအထားမှာတော့ ညှိလို့မရနိုင်သေးဘူး၊
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ – အခုကျွန်တော်မွန်ပြည်သူလူထုတွေက မွန်ပါတီနှစ်ခုပေါင်းစည်းရေးကိုကိစ္စကို တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စား နေကြပါတယ်၊ အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအရ ပေါင်းစည်းဖို့ဘာတွေအခက်အခဲဖြစ်နေသလဲ?
နိုင်ငွေသိန်း(ဥက္ကဌ)- နှစ်ပါတီပေါင်းစည်းရေးဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်က လုပ်သွားရမှာပါ၊ ဘယ်တောအောင်မြင်မယ်ဆိုတာ ယတိပြတ်မပြောနိုင်သေးပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်း ညှိုနှိုင်ဆွေးနွေးနေတုန်း၊ အချိန်ယူရအုံးမှာပါ၊ တကယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီ မှတ်ပုံတင်ပြီးလို့ရှိရင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကို တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းမယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကလည်းလက်ခံတယ်၊ ဒါကိုဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းသွားရမယ်။
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ – အခုရက်ပိုင်းမကြာသေးခင်က မွန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ နိုင်ငံတော်အစိုးရထံကို လက်နက်အပ်သွားပါတယ်၊ ဆရာနိုုင်တင်အောင်တို့လည်းပြောနေတယ် မွန်တွေတဖွဲ့တည်းဖြစ်အောင် စုစည်းရမယ်ဆိုတော့လေ၊ အဲဒီလိုအဖွဲ့ငယ်လေးတွေကို ဆရာနိုင်တင်အောင် မွန်ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးတော်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ စုစည်းပြီးတော့ စည်းရုံးမနိုင်ဘူးလား မွန်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပါ ခင်ဗျား?
နိုင်တင်အောင်(ဒုဥက္ကဌ-၁) – များသောအားဖြင့် အဲဒီလိုအဖွဲ့ငယ်လေးတွေဟာ မွန်ပြည်သစ်ကနေ ခွဲထွက်လာတာဖြစ်တယ်၊ ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူး၊ သူတို့ကို ကျွန်တော်တို့ကစုစည်းပြီးပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါ၊ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုရှိတာက မွန်ပြည်သစ်ပါတီကပဲ စုစည်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားရင် ပိုပြီးလက်တွေ့ကျမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ – ဆရာ့လို ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒါတွေကို ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ?
နိုင်တင်အောင်(ဒုဥက္ကဌ-၁) – ကျွန်တော်အကျိုးတော်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့က ဒီအဖွဲ့တွေက မွန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့စည်းကမ်းကိုဖေါက်ဖျက်ပြီး ခွဲထွက်သွားခဲ့တယ်၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီကအရေးယူထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းပါ၊ အဖွဲ့ငယ်လေးတွေပါ အင်အားတော့သိပ်မရှိတော့ပါ၊ အခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်သိတာက အဗင်း ဆိုတဲ့အဖွဲ့လက်နက်ချသွားတယ်၊ တစ်ဖွဲ့ကျန်နေသေးတယ်လို့ကြား တယ်၊ ဒီနေ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီက နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရယူပြီးထားဆိုတော့ ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့တင် ပြပြီးရင် တောင်းဆိုရင်လည်းရနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်။
မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ဥက္ကဌနိုင်ငွေသိန်း၏ နှစ်(၉၀)ပြည့်အကြို အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ယမန်နေ့မတ်လ(၁၁)ရက်နေ့တွင် မော်လမြိုင်မြို့ မွန်ဓမ္မာရုံ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့အပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရန်ကုန်တိုင်း(မ်း)သတင်းဂျာနယ်၊ အလဲဗင်းနယူး၊ ဖေးဘရိတ်၊ မြန်မာပို့စ်၊ အိုးပင်းနယူ၊ Express Time၊ မြဝတီ၊ Yangon press International၊ Myanmar post Global၊ The Voice of Mon ဂျာနယ်နှင့်အတူ လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီ တို့ တွေ့ဆုံမေးမြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ။ အယ်ဒီတာ
Previous ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မော်လမြိုင်မြိုနယ်မဲဆွယ်ဟောပြောမှု လူတစ်သိန်းကျော်တက်ရောက်
Next နွေရာသီမွန်စာပေသင်တန်း သင်ကြားနေပြီ